Iwe unoida iyo kunetiweki, kutsvaga basa, kurodha pasi zviwanikwa, kuendesa mafaera, kuisa zviyeuchidzo, kusangana newaunoshanda navo, uye nezvimwe zvakawanda.
Kunyangwe nekukwira kwemahofisi ekukurukurirana ehofisi, iwe uchiri kutsamira paemail yezvinhu zvinoshamisa zvinhu. Asi zvinosuruvarisa, kwete yese email sevhisi yakasununguka zvachose. Uye kunyange akasununguka anogona kunge asiri iwo ari nyore kushandisa kana kuve nezvose zvaunoda.
Zvinogona kuva zvinonetsa kuwana email mupi webasa pasina muripo inoenzanisira maficha akakodzera nekushandisa. Kubatsira kuti tsvagiridzo yako ive nyore, tinoisa pamwechete runyorwa rweakasiyana marudzi emaakaundi maemail aunogona kumisikidza, achiteverwa nevapfumbamwe vakanakisa vevashandi veemail iwe aunogona kuitisa account yako izvozvi mahara.
Mhando dzeEndaneti Maakaundi
Pane maviri akakosha marudzi evanopa rubatsiro emaimeri kusarudza kubva: email vatengi uye webmail. Paunoshandisa wako mupi kuwana yako email kubva kune chakasiyana chishandiso kana nzvimbo online, iwe unogona kushandisa imwe yeakakosha maemailemaemaitiro kuita kudaro: POP3, IMAP, uye Exchange.
Ngatimboti fambei pamusoro pemhando dzakasiyana dzevapi uye maprotocol.
Email maklayenti mapurogiramu esoftware aunoisa iwe pakomputa pachayo kubata email yaunotumira uye kugamuchira. Kuti uwane iyi email, mutengi anopindirana neiri kure email server.
Email vatengi izvo iwe ungangodaro wakanzwa nezvazvo zvinosanganisira Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, uye Apple Mail.
Kana iwe uchida kuwana iyi mhando yeemail kubva pawebhu, pane kushandisa komputa yemutengi, mutengi weemail anoshandisa imwe yeemaema protocols anotsanangurwa pazasi. Semuenzaniso, kunyangwe iwe ungave uine Outlook yakaiswa pakombuta yako, iwe unogona zvakare kupinda mukati kune yako email account kuburikidza neexlook.com uchishandisa yakatarwa email protocol.
Webmail imhando yeemail yaunowana chete kubva paInternet, uye saka iripo kunyanya pane iro gore kwete komputa yako. Panzvimbo pechishandiso chakaiswa chinotora email yako, unogadzirisa yako inbox chaipo kubva kune yako internet browser.
Webmail vanopa iwe waungangodaro wakanzwa nezvayo zvinosanganisira Gmail, Yahoo! Tsamba, uye AOL (zvese izvo zvakaita runyorwa rwedu rweakanakisa emaemaundi maemail, pazasi).
Kana iwe uchida kuwana yako webmail kubva kuemail app pane yako nhare mbozha, pane yako desktop webhu browser, webmail yako mupi anogona kushandisa imwe yeemail protocols anotsanangurwa pazasi.
Zvino, tisati tapinda mumaakaundi emahara emahara emahara, ngatitaurei nezveema protocols eemail.
Email maprotocol ndiwo masisitimu anonyatso kutora email yako kwauri. Ivo vanogona kushandiswa kutora email client maakaundi painternet, uye tora webmail maakaundi pane mbozhanhare app. Heano matatu matatu makuru marudzi eemail protocol iyo account yako inogona kushandisa.
POP inomiririra "post office protocol," uye inokodzera zvakanyanya kune vanhu vane email email chete uye mutengi weemail. POP3 ndiyo yazvino vhezheni yeiyi email protocol, uye inokutendera iwe kuti uwane email paunenge usiri pamhepo. Saka zvinoda zvishoma internet bandwidth.
IMAP inomirira "internet mail access protocol," uye ndeimwe yekare email email protocol iripo nhasi. IMAP4 inoonekwa seyazvino vhezheni, uye kusiyana nePOP protocol, hautore email yako kune yako isingabvumirwe email mutengi. Pane kudaro, yako yese email inogara online paunenge uchiwana uye uchigadzirisa.
IMAP inonyanya kubatsira kune vanhu vane email inopfuura imwechete account uye vanovawana kubva kune akawanda madhizaini kana nzvimbo.
Shanduko ndeye Microsoft email protocol, uye yakafanana neiyo IMAP protocol yakatsanangurwa pamusoro. Iyi protocol inobvumidza iwe kuti usangowana chete yako email pamusoro peinternet kubva kune akawanda madhijisiti, asiwo mabasa, makarenda, uye ruzivo rwekufonera rwakabatwa kune iyo email kero. Neichi chikonzero, zvinonyanya kubatsira kumasangano ane vashandi vanogovana akawanda marudzi eruzivo uye vanoshanda vari kure.
Iye zvino, tarisa zvinomwe zveakanakisa emahara evanopa rubatsiro maemail aunogona kuisa maoko ako nhasi - zvese zviri zviviri webmail uye email vatengi vanosanganisira. Kune yega yega email sevhisi, isu takaratidza yakasarudzika ficha kuti ikubatsire iwe kuwana yakanyanya kukodzera.
Akanakisa Mahara Eemail Akaundi
Yakasarudzika Feature: Native Faira Kubatana
Rudzi rweemail: Webmail
Ndiani anofanira kuishandisa: chero munhu anotoshandisa uye anoda zvimwe zvese zvigadzirwa zveGoogle.
Zvinogona kuita senge iri pachena yekusarudza kumusoro, asi Gmail inongove yakanyanyisa kuita kuti isape mubairo wekutanga. Gmail ine yechipiri-yepamusoro email inopa musika mugove (kuseri kweApple iPhone yechizvarwa email email), sekureva Litmus Labs. Uye zvinosetsa, chimwe chezvikonzero icho Gmail chazove chakakurumbira imhaka yesarudzo dzese dzekutaurirana dziri mubhokisi rako retsamba dzisingasanganise email.
Gmail ndeyemazuva ese email inbox iwe yaunogona kusaina nekunyoresa kuGoogle account. Asi yakavakirwa muGoogle Suite, boka remahara maapplication ayo anotendera iwe kuti utaure, vhidhiyo-musangano, uye ugovane mafaera nevanhu vari mune rako rekubata runyorwa.
Google Hangouts, inowanikwa kubva kubhokisi rako rebhokisi rekuruboshwe (kana kurudyi - unogona kugadzirisa mabhatiro ako kuti inbox inoratidzwa), inoita kuti utumire mameseji uye vhidhiyo kutaurirana nevamwe vashandisi veGmail zvinhu izvo zvingangotadza kutumira email. Kufanana nemamwe maakaundi maemail nhasi, Gmail zvakare ine inonzwisisika khalenda iwe kwaunogona kuseta misangano uye zviyeuchidzo.
Pro muromo: Iwe unogona zvakare kushandisa yemahara chigadzirwa senge HubSpot Misangano kuronga misangano zviri nyore pasina maemail ekumashure-uye-mberi.
Kusiyana nemamwe maakaundi maemail, unogona kushandisa kero yako yeGmail kuti upinde nekugadzirisa account yako yeYouTube, pamwe nekushandira pane zvinyorwa zvakagovaniswa uye maspredishiti kubva kuGoogle -gore-based Google Drive.
Ichipa 15 GB yemahara yekuchengetedza email pasina muripo, Gmail inoita zvese zvainogona kuti bhokisi rako rekunyorera risanyanya kunyongana, kusanganisira mafirita epamberi ayo anongo sundira maemail mumafaira akapatsanuka sezvavanosvika. Uye hapana rimwe remabasa aya rinobhadhara kana dhiri.
Yakasarudzika Feature: Isingagumi Kuchengetedza
Ndiani anofanira kuishandisa: vanhu vanoshandisa email kune mazhinji kutaurirana kwavo.
America Online (Ini ndinonzwa nostalgic kungo taipa aya mazwi) chinyararire yakaramba iine zvanhasi zviyero zveye yakanaka mushandisi ruzivo. Iyo yakasarudzika AOL ikozvino zvakare imwe yeakanakisa emahara email maakaundi aunowana kwauri.
Yakatengwa naVerizon muna2015, AOL inokuendesa email kubva kune yayo dzekare inotungamirwa nenhau-inotungamirwa peji, uye inouya neazvino spam mafirita uye hutachiona dziviriro iwe yaunotarisira kubva kune yako email mupi. Iwe unogona zvakare tumira mameseji uye pakarepo meseji kubva pane chaicho windows mune yako email inbox.
AOL ine chimwe chinhu pamusoro peGmail, asi: risingagumi kuchengetedza. Pamusoro pezvo, unogona kuendesa email mazita kubva kuCSV, TXT, kana LDIF faira kuitira kuti usiri kugadzira yako "shamwari shamwari" (tora?) Kubva pakutanga.
Yakasarudzika Feature: Akawanda App Kubatanidzwa
Rudzi rweemail: Email muteveri
Ndiani anofanira kuishandisa: vanhu vanoshandisa mapuratifomu akasiyana siyana kubatana nevamwe.
Kana iwe wakambokombama uchiona "Hotmail.com" kero yeemail, unogona kutenda Outlook nekuda kweichi chinyakare zita rezita. Asi pane nhau dzakanaka: Microsoft yakadzorerazve basa rayo refu reemail, uye yako yemahara Outlook.com kero yeemail ine akawanda mafambiro ekuenderera mberi akamirira iwe.
Ipo ichigunzva karenda uye meseji firita yakafanana neGmail, Outlook inosanganisirana nenhamba dzinoverengeka dzevamwe vanozivikanwa ekutaurirana maapplication. Iwe unogona kubatanidza Skype, Facebook, PowerPoint, PayPal, uye kunyange basa-manejimendi software senge Trello - zvichiita kuti zvive nyore kwazvo kusvika nekushanda nevasiri-Outlook vashandisi pasina kusiya yako inbox.
Outlook inopa 15 GB yemahara ekuchengetedza emumwe mushandisi, pamwe neakanyanya-akachena interface.
Yakasarudzika Chiitiko: 25 Bhizinesi Kero
Ndiani anofanira kuishandisa: kutanga uye mabhizinesi madiki.
Iyi ndiyo yekutanga yezvidiki-zvisingazivikanwe maemail maemail ekugadzira yedu runyorwa, asi inobata yakawanda mikana yemabhizinesi.
Chinhu chekutanga chauchacherekedza nezve Zoho ndiko kushandisa kwayo-kushamwaridzana Kubva mukubatanidza neGoogle Drive, Bhokisi, uye nevamwe vane gore-based mafaera maneja, kune iro rakavakirwa-mukati maneja maneja, ino sevhisi sevhisi inopa nzira yakapusa yekuita yako ese mabasa ezuva nezuva.
Musiyano chaiwo-mugadziri, zvakadaro, kugona kuita gadzirisa zita rezita kweanosvika makumi maviri neshanu email kero. Unoda kutsiva "@ zoho.com" ine zita rewebsite rako rebhizinesi? Iwe unogona kuzviita pasi peZoho Lite, iyo inokupa iwe 25 GB yemahara - ese ari pasi [email inodzivirirwa]
Yakasarudzika Feature: 200 Tsika Domain Names
Ndiani anofanira kuishandisa: mabhizimusi madiki, vanozvimiririra, uye vanozvishandira.
Izvo hazviwane zvakanyanya kuzvitsanangudza kupfuura "Mail.com," handizvo here? Uyu mupi weemail anoziva vateereri vake - kana ndinofanira kuti, vateereri.
Pakarepo kubva pabheti, ungangoona Mail.com haina stellar yekuchengetedza nzvimbo kana ichienzaniswa nesarudzo dziri pamusoro: 2 GB chete. Asi izvo zvinosiiwa newebhu webhusaiti iyi mugigabytes zvinozvigadzirira ne… drumroll… 200 emahara echinyakare mazita mazita. Unogona kutsiva "@ mail.com" panopera zita rako rekushandisa nezve chero chinhu chinokutsanangudza. Heano mamwe maitiro Mail.com akafanogadzirira kuti iwe usarudze kubva:
Toothfairy.com (ndiani aiziva kuti aive online?)
Mail.com haizorore pane ayo mazana maviri laurels, hazvo, sezvo iwo email mupi anouyawo nekendendari yekugadzira nekutevera zviitiko zvako vhiki imwe neimwe.
6. Yahoo! Tsamba
Yakasarudzika Feature: Midhiya uye yekubatanidza nhoroondo
Ndiani anofanira kuishandisa: zvisikwa uye avo vanotumira uye vanogamuchira zvinonamirwa kazhinji kuburikidza neemail.
Yahoo! Tsamba, imwe chikuva inozivikanwa, inogara kuseri kweAOL munzvimbo yekuchengetera ine 1 TB (ndiyo terabyte) yemahara, pamwe neakasarudzika mashoma masocial media mapindiro.
Kuwedzera kune yakasarudzika yemashure madingindira uye kugona kutsvaga kiyi ruzivo kubva kubhokisi rako rekushandisa, Yahoo! Tsamba zvakare inoita kuti zvive nyore kuwana pikicha yega yega, vhidhiyo, uye gwaro rawakambonamatira kana kugashira kuburikidza neemail mumatebhu avo pabhokisi rebhokisi rako rebhokisi. Izvi zvinoita kuti chikuva chinyanye kufadza kune avo vanogovana zvinyorwa nguva dzose kana kungoda dambarefu rakagadzirwa nemifananidzo yese yavakambogoverana.
Yakasiyana Feature: Yakanyorwa email
Ndiani anofanira kuishandisa: vanhu vanotumira uye vanogamuchira ruzivo rwakashata.
ProtonMail inopa chete 500 MB yenzvimbo yemahara, asi yekutengeserana kwakakodzera kwe encrypted email, inobvumidza iwe kutumira mameseji ayo asina mumwe munhu anogona kuona, uye kunyangarika mushure memwedzi.
Chii chinobata? Sevhisi yacho yakaoma kushandisa here? Sezvo nemazhinji mapuratifomu ewebhu, ProtonMail iri nyore kushandisa pane chero chishandiso pasina chero software inodikanwa kunyorera maemail ako. Yayo inbox interface iri nyore kunzwisisa nekukatarisa semamwe maemail masevhisi pane ino runyorwa, uye inopa anokurumidza mavara-akanyorwa makodhi kuti akubatsire iwezve kuronga kuti ndeapi maemail anokodzera zvakanyanya kuchengetedzwa uye kuchengetedzwa.
8. ICloud Tsamba
Yakasarudzika Feature: Label vanotumira seVIPs
Ndiani anofanira kuishandisa: vanhu vanoshandisa Mac uye vanoda zvese pane imwechete system.
Kana iwe uri mushandisi weMac, iwe ungangoda kufunga nezve kushandisa iCloud Mail seyako email mupi. Nhoroondo yavo yemahara yeemail inouya ne5GB yekuchengetedza iyo iwe yaunogona kushandisa kuyananisa ako mafoto, mafaera, kana email. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kuchengetedza kunogovaniswa pakati peese ako maapps uye zvishandiso - saka kana iwe ukatora akawanda mapikicha pane yako iPhone, iwe unogona kudya mune yako email yekuchengetedza mvumo yemwedzi. Zvirongwa zvakagadziridzwa zvinotanga pamadhora 0.99 / mwedzi uye zvinokwira kusvika ku $ 9.99 / mwedzi.
Imwe yemabhenefiti akakurisa ekushandisa iCloud pamusoro pevamwe vanopa email pane ino runyorwa ndiko kusununguka kwekubatanidza. Apple inovaka yavo desktop uye iPhone tsamba maapplication neese email vatengi mukati, asi inopa zvakanyanya kutarisisa kuita kuti chiitiko chinakidze kune vashandisi veICloud.
Zvimwe zvemaitiro eICloud Mail zvinosanganisira nyore kushandisa mashandiro ekutsvaga, mitemo iri nyore kushandisa, uye kugona kunyorera vanotumira seVIP. Kana wekutaurirana akaratidzirwa seVIP, meseji nyowani dzinozosefa kune yakasarudzika tebhu kuruboshwe, ichikuchengetera iwe nguva uye simba.
Yakasiyana Feature: Alias ​​email kero
Ndiani anofanira kuishandisa: vanhu vanoda akawanda maemail ane imwechete yepakati inbox.
Kunyange iwe ungangodaro usati wanzwa nezve GMX Mail, yanga iriko kwenguva yakati rebei (kubvira 1997) - uye iine boka rezvinhu zvinoita kuti zvikoshe kutariswa. Kutanga kubviswa, GMX inopa 65GB yekuchengetedza. Iyo yakawanda yekuchengetera yemahara email sevhisi. Muchokwadi, ivo vanoti izvo zvinokutendera iwe chengetedza inenge hafu yemiriyoni mameseji muInbox yako!
Chimwe chinhu chakakosha kucherechedza iko kugona kutumira zvakakura zvakanamatira. Nepo akawanda masevhisi aine makapeti eemaemail ekubatanidza, GMX Mail inokutendera iwe kutumira mafaera kusvika ku50GB. Izvo zvakanaka kana iwe uchigovana tani yemifananidzo, mharidzo, kana mamwe mafaera mahombe kubva kuaccount yako.
Asi chimiro cheGMX Mail chinonyatso chisiyanisa ndiko kugona kumisikidza ma alias email kero zvese kubva mukati meimwe account. Izvi zvinogona kubatsira mumamiriro mazhinji - zvese pachedu uye nehunyanzvi. Patsamba yako wega, unogona kushandisa imwe alias pane zvese zvaunotenga pamhepo uye ma logins - kuti uchengetedze maemail akapatsanurwa kubva kune ako mameseji. Kubva pane bhizinesi maonero, akawanda maemail kero anogona kuve anobatsira ekugadzirisa mabasa anoenderana nemaemail senge [email inodzivirirwa] or [email inodzivirirwa]
Yakasarudzika Feature: Maitiro ekugadzirisa, uye kugona kuvhura akawanda maemail mumatebhu
Rudzi rweemail: Email vatengi
Ndiani anofanira kuishandisa: chero munhu anotsvaga iri nyore, asi inogadziriswa email inbox.
Thunderbird, yemahara email kunyorera kubva kuMozilla, inozivikanwa neFirefox, inopa inokurumidza email inbox setup uye yakapusa, nyore kushandisa mushandisi interface.
Izvo zvinoshandiswa zvinopa zvigadziriso maficha, senge marongero emusoro uye zviwedzero zveapp zvinogona kuvandudza ruzivo rwako rweemail. Iyo email app zvakare inokutendera iwe kuvhura akawanda maemail mumatebhu, zvakafanana nekuvhura kwaungaita akawanda mawebhu mapeji mumabrowser eFirefox.
Yakasiyana Feature: 10 GB yemahara gore kuchengetedza
Ndiani anofanira kuishandisa: chero munhu anotsvaga yemahara email ine yekuwedzera kugona.
Yandex ikambani yeRussia webhu iyo inopa yepasirese email chishandiso. Nechigadzirwa, unogona kusaina account yemahara, kuibatanidza neaka Facebook, Twitter, kana maakaundi eGmail, uye woita yako email inbox.
Kufanana nevazhinji vevamwe vanopa pane ino runyorwa, Yandex's email inbox inogona kusetwa kusefa kana kuisa pamberi maemail kuti iwe uone mameseji kubva kuvanhu chaivo. Iyo inogona zvakare kuziva mazwi akakosha mumameseji uye misoro yenyaya uye kuronga maemail mumabhokisi emabhokisi akapatsanurwa. Pamusoro pezvo, vashandisi vanonyorera tsamba yeYandex vanowana 10 GB yemahara makore ekuchengetedza.
Kugadzira Zvikuru Email Yako
Uye nezvo, iwe une dzimwe dzakanakisa sarudzo yemahara email maakaundi gore rino. Asi ndiani anoziva? Yako email inotevera kero inogona kunge yakatosiyana nekukupa izvo chete zvaunoda kuti ubudirire.
Paunenge uchinge wasarudza email mupi uye watangisa nyowani email kero yakanangana nezvaunoda zvekushambadzira, iwe unofanirwa zvakare kuwedzera maapplication, kunze kwesoftware, uye APIs kuwedzera kune yako email zano.
Chishandiso chine simba chakakosha kucherechedzwa ndechekuti HubSpot's Yemahara Email chishandiso. Icho chishandiso chinokutendera iwe kubatanidza yako email kero kune iyo HubSpot CRM, uku zvakare ichikubvumidza iwe kuvaka maemaema matemplate uye kutumira mameseji akananga kubva kuHubSpot software. Kunyanya kubatsira? Iyo software inokurega iwe teedzera basic analytics uye unganidza vanyoreri veemail muCRM yako - iyo inogona kuwedzerwa kune yako email email zvinyorwa.
Kuti udzidze zvakawanda nezve yedu yemahara email chishandiso, tinya pano.
Vakanaka e-mail vanopa e2020: Mahara, Paid uye bhizinesi masevhisi